Fomba 5 mety hiresahan'Andriamanitra aminao | TOKO VAVAKA
Home vavaka Fomba 5 mety hitenenan'Andriamanitra aminao
Fomba 5 mety hitenenan'Andriamanitra aminao
Androany dia hampianatra amin'ny fomba 5 mety hiresahan'Andriamanitra aminao isika. Matetika ny olona dia manontany raha mbola miteny amin'ny olona Andriamanitra amin'izao fotoana izao. Raha jerena ny haavon'ny ota sy ny heloka bevava nanjaka teto an-tany, mbola mahita olona mendrika hifandraisana ve Andriamanitra? Ny fahamarinan'ny filazantsara dia ENY. Mbola miresaka amintsika Andriamanitra, ny hany tsy itovizany dia ny fomba firesahany amintsika dia tsy mitovy amin'ny tamin'ny andro taloha.
Ny olana ananan'ny ankamaroan'ny mpino dia ny fiheveran'izy ireo fa Andriamanitra dia tokony hiteny amin'izy ireo amin'ny fomba handrenesany an'Andriamanitra miteny. Tsy mino izy ireo fa misy fomba hafa ifandraisan'Andriamanitra amin'ny olony. Tsy miresaka mivantana amintsika Andriamanitra, miteny amin'ny alalàn'ny natiora Andriamanitra izay mitoetra ao anatintsika ilay olona avy amin'ny Fanahy Masina. Ao amin'ny bokin'i John 14: 26 Fa ny Mpananampy, dia ny Fanahy Masina, Izay hirahin'ny Ray amin'ny anarako, izy no hampianatra anareo ny zavatra rehetra sy hampahatsiaro anareo ny zavatra rehetra izay nolazaiko taminareo. Ny fanahin'ny tompo dia mitondra ny hafatr'Andriamanitra amintsika amin'ny fomba isan-karazany.
Tsy mila miandry ianao mandra-pandrenesanao mivantana ny feon'ny Tompo vao fantatrao fa miteny aminao Andriamanitra. Misy fomba maro hafa ahafahan'Andriamanitra miresaka aminao, ao anatin'izany:
Amin'ny alalan'ny Dreams ary Fahitana
Amin'ny alàlan'ny feon'ny fieritreretantsika
Amin'ny alàlan'ny olona hafa
Amin'ny alàlan'ny nofy sy fahitana
Ny nofy sy ny fahitana dia iray amin'ny fomba itenenan'Andriamanitra amintsika. Ny soratra masina dia milaza ao amin'ny bokin'i Asan'ny Apôstôly 2:17 Ary amin'ny andro farany, hoy Andriamanitra, dia handatsaka ny Fanahiko amin'ny nofo rehetra aho; Ny zanakalahinao sy ny zanakavavinao haminany, ny fahatanoranao hahita fahitana, ny anti-panahinao hanonofy. Ity no andro farany ampanantenan'Andriamanitra handatsaka ny fanahiny amin'ny nofo rehetra.
Mpanatanteraka ny testamenta nomen'Andriamanitra isika. Rehefa mitoetra ao amintsika ny fanahin'ny tompo, ny iray amin'ireo fomba vitsy hifandraisan'Andriamanitra amintsika amin'ny alàlan'ny nofy sy fahitana. Aza maka fotsiny ny nofy rehetra. Mety miresaka aminao Andriamanitra amin'ny alalany. Raha mba noforonin'i Josefa ho vazivazy fotsiny ny nofiny dia tsy nisy fomba nahatonga azy ho praiminisitra tany Egypt.
Midika izany fa tsy tokony hanonofy amin'ny fahaiza-miaina isika satria mety hiresaka amintsika Andriamanitra amin'ny alalany. Izany no antony ilantsika mivavaka mba hahazo ny fanahin'ny fahaiza-manavaka. Ny fanahin'ny fahaiza-manavaka dia hampahafantatra antsika raha ilay nofy dia zavatra raisina ho zava-dehibe na tsia. Nampanantena Andriamanitra fa hahita fahitana amin'ny tovolahy isika. Ka rehefa manokatra ny mason'Andriamanitra ianao ka mahita zavatra mihoatra ny fahitan'ny maso ara-batana dia aza raisina am-pitiavana. Mivavaha ho an'ny fanambarana sy ny dikany amin'izay hitanao fa Andriamanitra dia mety manandrana milaza zavatra aminao.
Amin'ny alàlan'ny feon'ny fieritreretana
Ny feon'ny fieritreretan'ny lehilahy dia iray amin'ireo taova fifandraisana mangina indrindra ao amin'ny vatana. Ny fanahin'Andriamanitra amin'ny alàlan'ny feon'ny fieritreretantsika dia milaza amintsika izay tokony hatao indraindray. Ny fiasan'ny feon'ny fieritreretana dia manampy antsika hanavaka ny tsara sy ny ratsy. Izany dia manazava ny antony mahatonga antsika hanana feon'ny fieritreretana meloka isaky ny nanao ratsy isika.
Ny bokin'i Ny Salamo faha-51 dia milaza fa ny sorona ataon'Andriamanitra dia fanahy torotoro. Ny fo torotoro sy mangorakoraka dia tsy hataon'Andriamanitra tsinontsinona. Ny lehilahy tsy manana feon'ny fieritreretana dia tsy afaka manana fanahy torotoro. Ny fanahin'ny tompo amin'ny alàlan'ny fieritreretantsika dia manome tsiny antsika rehefa nanao zavatra tsy mety isika. Ary koa, manana fahatsapana fanamaivanana ao an-tsaintsika isika rehefa nahavita zavatra tsara.
Ny feon'ny fieritreretantsika dia manosika antsika hanavaka ny tsara sy ny ratsy. Izy io koa dia manery antsika hanao izay marina sy eken'Andriamanitra.
Amin'ny alàlan'ny soratra masina
Nilaza ny mpanao salamo fa ny teninao dia tazomiko ato am-poko mba tsy hanotako aminao. Ny soratra masina dia mametraka ny teny sy fampanantenan'Andriamanitra ho an'ny ain'ny olona. Ny iray amin'ireo fomba malaza indrindra itenenan'Andriamanitra amintsika olombelona amin'ny alàlan'ny soratra masina. Tsy mahagaga raha nampitandremana isika mba tsy hanome fandikana ny soratra masina miorina amin'ny fahatakarantsika eto an-tany.
Ny soratra masina dia milaza ao amin'ny bokin'i Salamo 119: 130 Ny Ny fidirana amin'ny teninao dia manome fahazavana; It manome fahatakarana ny tsotra. Manome tari-dalana antsika amin'ny alàlan'ny teniny Andriamanitra. Ny tenin'ny Tompo dia manamaivana ny lalantsika ary manalalaka ny làlana maditra rehetra. Ka rehefa mandalina ny soratra masina isika dia ilaina ny mitady ny fitarihan'Andriamanitra mba tsy ho diso anjara isika rehefa miteny zavatra amintsika Andriamanitra amin'ny alàlan'ny andininy iray ao amin'ny soratra masina.
Fomba iray hafa ampitan'Andriamanitra amintsika amintsika anio ny famangiana anjely. Ny bokin'i Hebreo 1: 14 Moa tsy fanahy manompo va izy rehetra nirahina hiasa ho an'ireo izay handova famonjena? Fanahy manompo ny anjely. Ny fanompoana ataon'ny anjely dia hanjaka mandrakizay. Hampiasa anjely tsy tapaka Andriamanitra mba hifandraisana amin'ny olona.
Ny mahasamihafa azy fotsiny dia mety tsy hanantona antsika amin'ny endrika zavaboary any an-danitra izy ireo. Izy ireo dia afaka tonga tamin'ny endrika lehilahy mba hifandray amintsika. Mpandova ny famonjena isika ary ny anjely dia fanahy mpanompo namboarina ho an'ireo izay handova famonjena.
Tsy ny olona hafa ihany, fa ny mpandova famonjena. 1 Peter 4: 11 Raha misy miteny, dia aoka izy hiteny tahaka ny tenin'Andriamanitra. Raha misy manompo, dia avelao hanao toy ny fahaizana nomen'Andriamanitra izy, mba hankalazana an'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, ho Azy ny voninahitra sy ny fanjakana mandrakizay mandrakizay. Amena. Matetika Andriamanitra dia miresaka amintsika amin'ny alàlan'ny olon-kafa.
Mameno ny vavan'ny olona amin'ny teny izy ary hoy izy ireo amintsika. Na izany aza, tsy maintsy manana ny fanahin'ny fahaiza-manavaka isika mba hanavahana ny sandoka sy ny tena izy. Ary na inona na inona hafatra azontsika avy amin'ny pastera na mpaminany rehetra dia tokony ho fanamafisana izay nolazain'Andriamanitra tamintsika.
Andriamanitra no miteny
mihainoa an 'Andriamanitra
Previous lahatsoratraAntony 7 Tian'Andriamanitra Mivavaka Isika
Next lahatsoratraAzo ovana ve ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny alàlan'ny vavaka?
Teboka vavaka ho an'ny kamboty